PressReader - Isolezwe: 2018-11-09 - Likhulu ithemba ngeSuzuki Jimny entsha
Likhulu ithemba ngeSuzuki Jimny entsha
Isolezwe - 2018-11-09 - EZEZIMOTO - FANELESIBONGE BENGU IMOTO: SUZUKI JIMNY
KUYAMANGALISA ukuthi ibisihlale iminyaka engu-20 ikhona iSuzuku Jimny endala ngaphambi kokuthi kwethulwe entsha ngeledlule.
Le moto yaqala ukudayisa ngo-1970 futhi ebitholakala kuleli lokhu yaqala ukwakhiwa ngo-1999.
Yize kunjalo kodwa ibisaqhubeka nokuthengwa nokukubeka esithombeni sokuthi lena yimoto okunabantu abakholelwayo kuyo.
Empeleni lena entsha ifika nje, kuthiwa sekukhona abese befake amaoda ayo befuna ukuba ngabokuqala ukuhamba ngayo.
IJimny ingenye yama-4x4 ashibhile akhona emakethe futhi amancane. Ubude bayo buncishisiwe ngo-50 mm kunendala ngenxa kabhampa ngaphambili lokhu okusho ukuthi isingu-3 625 mm. Yize kunajlo kodwa iwheelbase isafana kwazise ingu-2 250 mm.
Ububanzi bayo bungu-1 645 mm nokuwukuvuleka ngo-45 mm kunendala.
Ezinye izinombolo ezibalulekile okumele ngisheshe ngikutshele ngazo yi approach angle yayo esingu-37 degrees isuka ku-35 degrees. I-departure angle yona isingu-49 degrees isuswa ku-46 degreess kuthi i breakover angle yona yenziwa yaba ngu-28 degrees kade ingu-27 degrees. Lokhu kwenza ukuthi ingashayi phansi uma igudla obhuqwini futhi okunye okulekelelayo ukuthi bayiphakamise ngo-20 mm okuyenza umhlaba iwushiye ngo-210 mm.
Ngesikhathi siyivivinya emigwaqeni yaseMpumalanga ngeledlule, ibingenankinga yokuhamba noma yikuphi (bheka i video ekhasini lami likaTwitter @fanelebengu).
Ubhuqu ibilushaya futhi iqwala izintaba ngaphandle kokutabalasa okutheni.
Ngaphansi kwebhonethi kwaSuzuk bayifake injini entsha engu-1.5 litre kaphethroli engena esikhaleni sengu1.3 litre.
Le njini inamandla angu-75 kW netorque engu-130 Nm.
Le njini bathi ilula ngokwesisindo kunengu-1.3 litre nokwenza ukuthi yonge kuphethroli. Ino-gearbox onamagiya ayisihlanu ashintshwayo noma amane azishintshayo.
Eshintshwayo bathi isebenzisa amalitha angu-6.3 kaphethroli ngo-100 km kuthi ezishintshayo yona ibe ngu6.8. Njengoba ngishilo ukuthi ushintsh lwenjini bathe luyenza yonge, endala yona ibiphuza amalitha angu-7.2 kuthi ezishintshayo iphuze angu-7.8 ngo-100 km.
Okuyenza ingaxakeki ukuhamba noma yikuphi yingoba iyi-4x4, okusho ukuthi idonsa ngawo womane amasondo. Ine AllGrip Pro okuyilapho umshayeli ekhetha khona phakathi kwe-4x2 (2H)
edonsa ngamasondo angemuva, 4x4 high ne-4x4 low range.
Kunegear elincane olisebenzisayo futhi uma uyisusa ku-2H uyisa ku-4H awudingi ukuthi ume ngoba liyangena ngisho uhamba ngesivinini esingaphansi kuka-100 km/h.
Ezinye izinsiza eziyilekelayo ukuthi ihambe kahle futhi iphephe yi-ESP futhi ezintabeni zelekelelwa yiHill Hold Function kanjalo neHill Descent Control.
Engikuqaphelile kodwa ngesikhath sihamba ngayo wukuthi inomsindo ngaphakathi. Besihamba ngenogearbo ozishintshayo futhi ibivele idumele phezulu uma isihamba ngo-120km/h nokungayisiza ukuthi ibe negiya lesithupha ukuze kuzokwehla nama revvs. Uma kunyukela ibikhathala kudingeke ukuthi wehlise amagiya noma uma ufuna ukudlula enye imoto. Iqhubeka ekhasini